GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Armenian (West) Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese Punjabi Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tetun Dili Thai Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Wolaita
▪ Ebe ọ bụ na Baịbụl kwuru na Chineke “kere ihe niile,” ụfọdụ ekwubiela na ọ ga-abụrịrị ya kere Ekwensu. (Ndị Efesọs 3:9; Mkpughe 4:11) Baịbụl gosiri nnọọ na ọ bụghị ya kere ya.
Jehova kere onye ghọrọ Ekwensu. N’ihi ya, na onye a nke kacha emegide Chineke dị adị ekwesịghị imegide ihe Akwụkwọ Nsọ kwuru banyere Onye Okike bụ́ Jehova. E kwuru banyere ya, sị: “Ihe zuru okè ka ọrụ ya bụ, n’ihi na ụzọ ya niile bụ ikpe ziri ezi. Chineke nke kwesịrị ntụkwasị obi, onye ikpe na-ezighị ezi na-adịghị n’ebe ọ nọ; onye ezi omume na onye ziri ezi ka ọ bụ.” (Diuterọnọmi 32:3-5) Site n’ihe e kwuru ebe ahụ, anyị nwere ike ikwubi na ọ dị mgbe Setan zuru okè ma bụrụ onye ezi omume, ya bụ, otu n’ime ụmụ Chineke bụ́ ndị mmụọ ozi. Na Jọn 8:44, Jizọs kwuru na Ekwensu ‘eguzosighị ike n’eziokwu,’ bụ́ nke pụtara na ọ dị mgbe Setan bụ onye eziokwu nke na-enweghị mmehie ọ bụla.
Ma, dị ka ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi Jehova kere, mmụọ ozi ahụ ghọrọ Setan nweere onwe ya ịhọrọ ime ezi ihe ma ọ bụ ihe ọjọọ. Ebe ọ họọrọ imegide Chineke na iduhie mmadụ abụọ mbụ isonyere ya, o mere onwe ya Setan, nke pụtara “Onye Mmegide.”—Jenesis 3:1-5.
Mmụọ ọjọọ ahụ mekwara onwe ya Ekwensu, nke pụtara “Onye Nkwutọ.” Ọ bụ Setan bụ mmụọ ahụ nọ n’azụ agwọ ahụ ma jiri aghụghọ na ụgha duhie Iv inupụrụ iwu doro anya nke Onye Okike ya isi. Ọ bụ ya mere Jizọs ji kpọọ Setan “nna ụgha.”—Jọn 8:44.
Ma, olee otú mmụọ zuru okè, onye na-enweghị mmehie n’ime onwe ya, nke na-enweghịkwa ndị ọjọọ ya na ha nọ, ga-esi chee echiche ọjọọ? O doro anya na ọ gụwara ya agụụ inweta ofufe nke dịịrị naanị Chineke, ya ahụkwa na ya nwere ike ime ka ụmụ mmadụ nọrọ n’okpuru ya kama ịnọ n’okpuru Jehova. Ebe ọ nọgidere na-eche banyere ya kama iwepụ ya n’uche ya, o kwere ka ọ gbanye mgbọrọgwụ n’obi ya, ya emechaakwa mezuo ya. A kọwara otú ụdị ihe ahụ si eme n’akwụkwọ Jems, sị: “A na-anwa onye ọ bụla mgbe ọchịchọ nke aka ya rapụtara ya wee rafuo ya. Mgbe ọchịchọ ahụ tụụrụ ime, ọ na-amụpụta mmehie.”—Jems 1:14, 15; 1 Timoti 3:6.
Iji maa atụ: Ka e were ya na onye mpịazi ego hụrụ na ya nwere ike ịgbanwe ihe ndekọ ụlọ ọrụ ya iji zuru ego ụlọ ọrụ ahụ. O nwere ike iwepụ echiche ọjọọ ahụ n’uche ya ngwa ngwa. Ma, ọ bụrụ na ọ nọgide na-eche ya, kama iwepụ ya n’obi ya, echiche ọjọọ ahụ ga na-esikwu ike, o yikwara nnọọ ka ọ̀ ga-emecha mezuo ya. Ọ bụrụ na o mezuo ya, o meela onwe ya onye ohi. Ọ bụrụ na ọ gọọ agọ mgbe e jidere ya, ọ ga-aghọkwa onye ụgha. N’otu aka ahụ, site n’ịmalite iche echiche ọjọọ na ime ya eme, mmụọ ozi ahụ Chineke kere ji ikike o nwere ịhọrọ ihe ọ ga-eme ghọgbuo mmadụ abụọ ahụ ma nupụrụ Nna ya isi, si otú ahụ mee onwe ya Setan bụ́ Ekwensu.
Ma, obi dị anyị ụtọ na a ga-ebibi Setan bụ́ Ekwensu mgbe oge Chineke ruru. (Ndị Rom 16:20) Ka ọ dịgodị, a na-eme ka ndị na-efe Jehova Chineke mara aghụghọ Setan ma na-echebe ha n’atụmatụ aghụghọ ya. (2 Ndị Kọrịnt 2:11; Ndị Efesọs 6:11) Ya mere, mee ike gị niile ‘iguzogide Ekwensu, ọ ga-agbapụkwa n’ebe ị nọ.’—Jems 4:7.
Ebe otu mmụọ ozi zuru okè họọrọ imegide Chineke, o mere onwe ya Setan
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Chineke ò kere Ekwensu?